Nhọrọ nke akwụkwọ akụkọ na -akpachi anya
Nyocha nke akwụkwọ akụkọ na -akpachi anya
Island of the Lost Tree, nke Elif Shafak dere
Osisi ọ bụla nwere mkpụrụ nke ya. Site na osisi apụl na ọnwụnwa ya oge ochie, zuru ezu iji chụpụ anyị na paradaịs, na osisi fig nkịtị na mkpụrụ osisi ya na-adịghị ahụkebe jupụtara na ihe nnọchianya n'etiti ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ihe dị nsọ, dabere n'otú ị si ele ya anya na, n'elu ihe niile, dabere na ya. onye na-ele ya anya... Akụkọ dị na…
3 akwụkwọ Anne Tyler kacha mma
Izu ụka bụ ohere zuru oke maka mmadụ ọ bụla. Site n'ọnụ ụzọ ime ụlọ nke ụlọ ọ bụla, yipụ ihe na -eme ka ọ dị ugbu a, mkpụrụedemede anyị na -aghọ nke kacha dịrị adị. Na Anne Tyler na -arara ọrụ ya nye ụdị nyocha zuru oke, nke ...
Eluigwe dị n'elu ụlọ, nke Nathacha Appanah dere
Kedu onye ọzọ nke mebere anya mmiri na ihe nkiri Marco n'ịchọ nne ya. Oge a ka afọ onye protagonist, Lobo, ga -eme ka ọ bịaruo Holden Caulfield nso (ee, onye na -eto eto nihilistic ama ama Salinger). Na ihe bụ na ọnụ ọgụgụ nne ...
Na -efu, nke Alberto Fuguet dere
Enwere oge mgbe asụsụ na -eso akụkọ nwere ezigbo ihie. Maka na ịchọ onye furu efu anaghị achọ egwu ma ọ bụ nka. Njirimara nke akụkọ na -eme ka ụzọ a maka njikọta onwe onye bụ ngwakọta nke ịdị nso na ịdị nso iji mee ka anyị bịaruo mmadụ niile nso ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji10 Ọzọ →